Tartanka loogu jiro qaadista horyaalka - BBC Somali
Tartanka loogu jiro qaadista horyaalka
Image caption Kooxda Crystal palce
Maanta oo Isniin ah waxaa jirta ciyaar ka tirsan tartanka horyaalka Ingiriiska oo dhexmaraysa kooxaha Crystal Palace iyo Liverpool oo iyada iyo Manchester City ay min 80 dhibcood ku wada hoggaaminayaan kala horreynta kooxaha.
Kooxda Norwich waxay nooleysay rajadii ay ka lahayd inay ka sii mid ahaato kooxaha ka ciyaaraya horyaalka Ingiriisa kaddib markii ay barbardhac gool la'aan la gashay kooxda Chelsea, taas oo dhaawac u geysatay damacii Chelsea ay ka lahayd inay horyaalka qaaddo sanadkan.
Maamulaha Chelsea, Jose Mourinho, waxaa uu sheegay inuusan ka shallaysanayn ku soo noqoshada Chelsea oo sanadkan aan wax koob ah kor u qaadin.
Chelsea waxay hadda ku jirtaa kaalinta 3aad, waxayna leedahay 79 dhibcood. Waxaa u harsan hal ciyaar oo keliya halka Liverpool iyo Manchester City ay u harsan yihiin min labo ciyaarood.
Maamulaha Arsenal, Arsene Wenger, waxaa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inay ka mid noqdaan afarta kooxood ee sanadkan ugu sarreeya tartanka horyaalka Ingiriiska kaddib markii ay 1-0 uga badiyeen kooxda West Brom.